जनकपुरबाट पहिलो पटक पटनाका लागि छुट्यो बस
प्रदेश-२ को राजधानी जनकपुरबाट भारत विहारको राजधानी पटनासम्म बस सेवा शुरु भएको छ।
प्रकाशित: २०७५-०५-३१ १३:५१:५८ धैर्यकान्त दत्त
जनकपुरधाम- प्रदेश-२ को राजधानी जनकपुरबाट भारत विहारको राजधानी पटनासम्म बस सेवा शुरु भएको छ। प्रदेश-२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आइतबार हरियो झण्डा देखाएर बस सेवा आरम्भ गरे।
यसअघि २८ भदौमा विहारका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले पटनामा हरियो झण्डा देखाएर पटनाबाट जनकपुरसम्म बस सेवाको उदघाटन गरेका थिए। नेपाल र भारतबीच पारवहन सम्झौताअनुसार जनकपुर-पटना बस सेवा शुरु भएको हो।
बिहान ११ बजे ३० जना यात्रु बोकेर जनकपुरबाट छुटेको बस साँझ ५/६ बजे पटना पुग्नेछ। पहिलो चरणमा दुवै स्थानबाट दैनिक २/२ बस सञ्चालन गरिने जनकपुर अञ्चल बस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरीले बताए। दुवैतर्फबाट चार वटा बस सञ्चालन गर्ने परमिट प्राप्त भए पनि यात्रुको चापअनुसार बस थपिँदै जाने उनले बताए।
जनकपुर बसपार्कबाट हरेक दिन बिहान १० र राति ८ बजे तथा पटनाबाट बिहान ८ र राति १० बजे बस छुट्ने समय निर्धारण गरिएको जनाइएको छ। नेपाल-भारत मैत्री बस सेवा नाम दिइएको बस सेवाका लागि नेपालको तर्फबाट काठमाडौंस्थित स्वयम्भु मञ्जुश्री प्रालि र भारततर्फबाट विहार राज्य पथ परिवहन विभागले बस उपलब्ध गराएको छ।
जनकपुरबाट पटनासम्म करिब सात घण्टाको यात्राका लागि नेपाली चार सय ४० रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरिएको छ। जनकपुरबाट छुट्ने बस भिठ्ठामोड, सीतामढी, मुजफ्फरपुर हुँदै पटना पुग्नेछ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सन् २०१४ मा सार्क सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएका बेला जनकपुर-पटना र काठमाडौं-बोधगया बस सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए। मोदीले घोषणा गरेको चार वर्षपछि बस सेवा शुरु भएको हो।
अहिले शुरु गरिएको बस सेवाले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने मुख्यमन्त्री राउतले बताए। सेवा शुभारम्भ कार्यक्रममा स्वयम्भु मञ्जुश्री प्रालिका अध्यक्ष अनिल चालिसे, जनकपुरका मेयर लालकिशोर साह, विहार राज्य पथ परिवहन मुजफ्फरपुरका क्षेत्रीय प्रबन्धक एसएन झालगायत उपस्थित थिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले जनकपुर भ्रमणका क्रममा जनकपुर-अयोध्या बस सेवाको उदघाटन गरेका थिए। तर, जनकपुर-अयोध्या बस सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उदघाटन गरेको सेवा नै सञ्चालन हुन नसकेपछि अहिले शुरु गरिएको सेवा पनि बन्द हुने शंका उब्जिएको छ।
कोरोना संक्रमणबाट बच्न जापानका सबै स्कुल बन्द
भविष्यमा होला त भारत-अमेरिका डिल?
साढे दुई दशकपछि ब्युँतिएको माईभ्याली
संसदबाट भागेको छैन, जवाफ दिन्छुः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गाैला प्रत्यारोपण केही दिनमै
भारतले नाकाबन्दी गर्दा बोल्न नसक्ने कांग्रेस केकमा राष्ट्रवाद खोज्दैछः ओली
खप्तड गोल्डकप : साविक विजेता प्रहरी क्वाटरफाइनलबाटै बाहिरियो
१ कोरोना संक्रमणबाट बच्न जापानका सबै स्कुल बन्द
२ भविष्यमा होला त भारत-अमेरिका डिल?
३ कर्णालीका गैरसरकारी संस्था संकटमा : लगानी घट्यो, कर्मचारी कटौती
४ साढे दुई दशकपछि ब्युँतिएको माईभ्याली
५ खप्तड गोल्डकप : साविक विजेता प्रहरी क्वाटरफाइनलबाटै बाहिरियो
आइजीपीको ब्रिफिङमा गएको प्रहरी भ्यान ट्रकसँग ठोक्कियो, पाँच प्रहरी घाइते